प्रधानमन्त्री देउवालाई अर्को झट्का, काठमाडौ नपुग्दै सुन्नु पर्यो दुखद: खबर — Imandarmedia.com
प्रधानमन्त्री देउवालाई अर्को झट्का, काठमाडौ नपुग्दै सुन्नु पर्यो दुखद: खबर
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री देउवालाई अर्को झट्का लाग्ने संकेत देखिएको छ। दिल्लीमा रहेका देउवाले एकाएक नमिठो खबर सुन्नु परेको छ। प्रचण्डले एमालेसँग मिल्ने चेतावनी दिनुको कारण अर्कै, रातको १२ बजेसम्म प्रचण्डका विश्वासपात्र र एमाले नेताबीच गोप्य मिटिङ यस्तो सूचना बाहिरीएपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा फेरि रडाको मच्चिने संकेत देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई चुनावी तालमेलको विश्वासिलो आधार नदिए नेकपा एमालेतिर जाने चेतावनी दिएपछि गठबन्धनभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ।
प्रचण्डले तालमेलमा ‘सम्मानजनक हैसियत’को विषयलाईसमेत उठान गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेससँग चुनावी तालमेलको विश्वासिलो आधार खोजी गरेपनि त्यसको कारण अर्कै हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरु केही दिनअघि चीन भ्रमण गरेर फर्किएका थिए। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहितको टोली गत साता कुन्मिङ गएको थियो।
भने माओवादी नेताहरु वर्षमान पुन र देव गुरुङ पनि कुन्मिङ पुगेका थिए। दुबै दलका नेताहरु एकैपटक चीन भ्रमणमा जानु संयोग मात्रै नभएकाले पार्टी एकताका लागि चीन सक्रिय भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
उनले ‘तपाईंहरुले जित त सुनिश्चित गरिसक्नुभएकै छ, अब त्यसमा के छलफल गराई भयो र ? भनेका थिए। यसले गठबन्धनलाई कांग्रेसले हल्का ढंगले लिएको प्रष्ट भएको भन्दै उनले एमालेतिर जाने चेतावनी दिए।
चुनावी गठबन्धनको कुरालाई तपाईंहरुले एकदम हल्का रुपमा लिइरहनुभएको छ, यो कुराले म एकदमै प्रेसरमा छु। मेरा साथीहरु राति १२ बजेसम्म पनि नेकपा एमालेका नेताहरुसँग मिटिङ गरिरहनुभएको छ।
प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, स्थानीय सरकारको गठबन्धन सही ढंगले गएन भने मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईंहरु नै अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ।
प्रचण्डले एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरुबीच सम्वाद भइरहेको र कांग्रेस गम्भीर नभए एमालेतिर जानसक्ने चेतावनी दिए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने कुनै प्रतिउत्तर नदिएकोे ती नेताले जानकारी दिए।
कांग्रेस सभापति देउवा पनि केन्द्रबाटै तालमेलबारे निर्णय गर्ने पक्षमा छन्। तर डा. शेखर कोइराला समूहले एक्लै लड्नुपर्ने दबाव दिएको छ भने तल्लो तहबाट तालमेलबारे केन्द्रबाट निर्णय नगर्न चर्को खबरदारी छ।
यो अवस्थामा तालमेल गर्दा कांग्रेसको एउटा शक्तिले असहयोग गर्ने हो कि भन्नेमा प्रचण्ड सशंकित देखिएको सहभागी एक नेताले भने। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बन्दा कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो भएको थियो।
प्रचण्ड स्वयंमले बिहीबार गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो पार्टीका नेताहरु चुनावी तालमेलका लागि एमाले नेताहरु निरन्तर संवादमा रहेको सुनाएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरु केही दिनअघि चीन भ्रमण गरेर फर्किएका थिए।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहितको टोली गत साता कुन्मिङ गएको थियो भने माओवादी नेताहरु वर्षमान पुन र देव गुरुङ पनि कुन्मिङ पुगेका थिए ।
दुबै दलका नेताहरु एकैपटक चीन भ्रमणमा जानु संयोग मात्रै नभएकाले पार्टी एकताका लागि चीन सक्रिय भएको कतिपयको बुझाइ छ।चीनबाट फर्किएपछि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पार्टी बैठकमै चीनले वामपन्थी मिलेर जान सुझाव दिएको ब्रिफिङ गरेका थिए।
माओवादी नेता देव गुरुङले पनि नेपालका बामपन्थीहरु एक होउन भन्ने चीनको पुरानै चाहना रहेको र यसपाली पनि उनीहरुले त्यही शुभेच्छा प्रकट गरेको बताएका थिए ।
नेताहरुका अनुसार नेताहरु चीनबाट फर्किएलगत्तै दोस्रो तहका नेताहरुले स्थानीय चुनावमै वाम तालमेलको सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन्।